2012 ကိုပြန်လှည့်ကြည့်ခြင်း... (အစ်မတော်ပစ်ပစ်ရဲ့ တဂ်ပို့စ်) | မိုးသကျဦးလှငျ
Home » တဂ်ပို့စ် » 2012 ကိုပြန်လှည့်ကြည့်ခြင်း... (အစ်မတော်ပစ်ပစ်ရဲ့ တဂ်ပို့စ်)
ရေးသားသူ : မိုးသက် // 5:07 PM
Posted by မိုးသက် at 5:07 PM Read more
ညိမ်းနိုင် December 22, 2012 at 6:26 PM
တိုင်းဝယ်တယ်...၊ဇန်နဝါရီလလည်ကျော်ရင် ဗလာပဲ....... :)))))
blackroze December 22, 2012 at 9:09 PM
ရေးပြီးရင် တစုံတယောက်ကိုဖတ်ဖို့ ပို့ပေးလိုက်တာဘဲ
ကျွန်တော်တို့ ဖဘ မှာစာတွေရေး ဘလော့
နင်တို့အကောင့်လေးတွေမီးမစိမ်းလည်း အမရင်ထဲမှာ နင်တို့လေးတွေကို
မေမြို့မိုး December 22, 2012 at 10:08 PM
ဟုတ် ကျေးဇူး ပါအစ်မပစ်..
Anonymous December 22, 2012 at 11:45 PM
၂၀၁၂ ဟာ ဘလော့ဂါတွေ အသည်းကွဲတဲ့ နှစ်လို့ထည့်ရေးလိုက်မယ်နော ဦးလေးမိုး.... နေ့ စဉ်မှတ်တမ်းတော့ မရေးဖြစ်တော့ဘူး..သတိမရချင်တော့ဘူး...
မိုးငွေ့........ December 23, 2012 at 12:36 AM
Sweety Snow December 23, 2012 at 9:38 AM
၂၀၁၂ မှာ အပြောင်းအလဲတွေ ရှိခဲ့တာကို ဖတ်လိုက်ရတယ်..။ တရင်းတနှီးစကားမပြောဖြစ်ပေမယ့်လည်း Blog စရေးကတည်းက မေမြို့မိုးကို မောင်လေးတစ်ယောက်လို ခင်မင်ခဲ့ပါတယ် .။
Candy December 23, 2012 at 9:57 AM
အမ်.. သူတို့ဟာသူတို့သောက်ချင်တိုင်း ငါ့မွေးနေ့ကို နာမည်တပ်သေးတယ်. ဒီကောင်လေး နာတော့မယ်။ နောက်ဆုံးအဆုံးသတ်လေးကို အကြိုက်ဆုံးပဲ :D :D
အိမ်မက်စေရာ December 23, 2012 at 1:14 PM
ဒိုင်ယာရီရေးပြီး ပြန်ဖတ်မိရင် ဝမ်းနည်းတက်လို့ အမတော့ မရေးဖြစ်ဘူး..ပို့စ်လေးက အသက်ဝင်တယ်.သူမအတွက်ရေးထားတာလေး အရမ်းကြိုက်တယ်..
မိုးနတ်ကြယ်စင် December 25, 2012 at 3:10 AM
မောင်လေးရဲ့ ကျန်ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၂ အကြောင်းလာဖတ်သွားပါတယ်...
နောက်ဆုံးအပိုဒ်လေးက ရင်ထဲ တကယ်ထိတယ်...ရင်ထဲကစကားတွေမို့ထင်ပါတယ်...:)
အမတို့လဲ ဘယ်အချိန်ထိ ဘလော့လေး မီးစိမ်းနိုင်မယ်မသိသေးပေမဲ့ အခြေအနေပေးနေသရွေ့
တော့ ရေးဖြစ်နေအုံးမှာပါ...အလုပ်ကလဲ လုပ်ရသေးတယ်ဆိုတော့...ဒီလိုပါပဲ...:(
mstint December 28, 2012 at 8:20 AM
တဂ်ပို့စ်လေးအခုမှ ဖတ်ဖြစ်တယ် မိုးသက်ရေ။ ဒိုင်ယာရီစာမျက်နှာပေါ်မှာ
အမှတ်တရ ရက်စွဲနဲ့စာသားလေးတွေ ခြေရာချန်ခဲ့တာလေးတွေ သဘောကျတယ်။
တီတင့်မှာရှိသမျှ ဒိုင်ယာရီတွေက အလုပ်ရဲ့ Schedule တွေမို့ ဖတ်လို့ကောင်းဘူး :P
May Khin January 16, 2013 at 6:03 AM